नेपाल आज | भारतीय दुतावास यसरी बन्यो नेपालको अर्को सरकार
अर्थ कभर स्टोरी ताजा खबर समाचार समाज
भारतीय दुतावास यसरी बन्यो नेपालको अर्को सरकार
भारतीय दुतावासले बनाइदिएको भवनको उद्घाटन गर्नेक्रममा शनिबार अर्घाखांचीको जनज्योती विद्यालयका विद्यार्थीलाई भारतको गुलामी गर्न लगाइयो । भारतले जे भन्यो त्यही नेपालले मान्नुपर्ने, भारतलाई छोडेर अरुसंग हात मिलाउन नहुनेजस्ता सार्वभौमसत्ता विरोधी गीत गाउन विद्यार्थी बाध्य बनाइए । तीन जना अबोध बालिकाले गाएको त्यो गीतमा बिषको मात्रा कति छ भन्ने उनीहरुलाई के थाहा ? नेपाललाई धज्जी उडाइएको र भारतको जयजयकार गरिएको सो सन्दर्भ कुनै घटना होइन, देशभरिकै प्रवृत्ति हो ।
आठ कोठे भवन बनाइदिएर भारतीय दुतावासले सो विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई गुलाम बनाउने प्रयास गर्यो । गाऊमा विकास ल्याइदिएको भन्दै चुनावी आधार तयार गर्न पुगेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आफैं गुलामी गरिरहेका थिए । उनी भारतलाई शीरमा राखेर नेपाललाई तिर हानिएको घटनाको साक्षी बने । दुई दिन अर्घाखांची रहेका राजदुत रेले उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई पछि लगाउंदै ३ वटा विद्यालयको भवन उद्घाटन गरे । यो त अर्घाखांचीको कुरा भयो । दिनहुंजसो राजदुत रे विभिन्न जिल्लामा देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो शिलन्यास र उद्घाटनमा व्यस्त रहन्छन् । नेता र स्थानीय अगुवा दुतावासमा योजना पाउं भनि हातपाउ जोडिरहेका हुन्छन् । गाऊमा विकास नलगे नेता हुन नपाइने भएपछि देशै भरिका मन्त्री, सभासद्, स्थानीय नेता र अगुवाले दुतावासको दैलो धाउंन बाध्य छन् । ‘नेपालको योजना आयोगमा गयो भने बजेट पाइने कहिले कहिले, राजदुतलाई रिझाइयो भने तुरुन्तका तुरुन्तै’ यो मनोविज्ञान देशैभरि फैलिएको छ ।
यहांबाट शुरु भयो यस्तो प्रवृत्ति
जनआन्दोलनताका गृहमन्त्री रहेका कमल थापा १ दशकको अन्तरालमा सिंहदरबारमा पुर्नस्थापित भएका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि उनले राष्ट्रियताको नारा चर्को गरी उठाए । वाकपटुताका धनी थापाले विगतलाई पूरै विर्साउन सफल भए । जब सरकारमा गए उनको अवसरवादी शैली पुनः देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उनी एकपछि अर्को गरी परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री बने ।
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुंदा उनी शक्तिशाली मन्त्री थिए । सानो मन्त्रीपरिषद्मा थापाहरुको बर्चश्व थियो । त्यतिबेला थापाहरु नै प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रमुख थिए । राजा देखि सुरक्षाकमाण्ड समेत क्षेत्रीको हातमा रहेको सो समय क्षेत्रीय बंशको शासनजस्तो देखिन्थ्यो । तर त्यहीबेला नेपालमाथि धोका भयो ।
भारत नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न आफुखुशी लगानी गर्न चाहन्थ्यो । पंचायतकालदेखि उसले सो प्रयास गर्दै आएको थियो । बहुदलमा पनि सोका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइयो । टारिंदै आएको सो प्रस्ताव सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पारित भयो । भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारको स्विकृति नलिइ उसैले ईच्छाएको ठाऊंमा तीन करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भयो । पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ३ करोडलाई बढाएर ५ करोड बनाइयो । भारतीय दुतावासले यसरी बढीमा ५ करोडसम्मका योजना देशका विभिन्न ठाऊंमा एकसाथ अघि बढाउन पाउने भयो । धेरथोर लगानी गाऊंघरमा भित्रिएपछि गाऊबासीपनि खुशी हुने भए । सांसद र नेतापनि विकास भित्र्याउन सकेकोमा लाभान्वित हुंने भए । भारतलेपनि रणनैतिक महत्वको ठाऊंमा लगानी गर्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मौका पायो । ठगियो केबल देश !
कमल थापाको दोहोरो चरित्र
कमल थापा प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली दोस्रो मन्त्री हुंदा भारतीय दुतावासलाई स्वविवेकले लगानी गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । एक अन्र्तवार्तामा उनले सो निर्णय गल्तीवश भएको स्विकार गरेका थिए । सोही निर्णयका कारण भारतीय दुतावासले समानान्तर सरकार चलाउने अवसर पाएको भन्दै उनले सच्चाउनुपर्ने बताएका थिए । एककदम अघि बढ्दै उनले भनेका थिए,‘अरु पार्टीले के गरेका छन् थाहा छैन, हाम्रो पार्टीले घोषणापत्रमै भारतीय दुतावासलाई समानान्तर सरकार चलाउन दिन हुंदैन भनेर लेखेको छ । यो निर्णय सच्चाउनुपर्छ । यत्ति भनौं त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नगरिकन सो निर्णय भएको थियो ।’
डेढ बर्षअघि बोलेको यो बोली पूरा गर्ने ठाउंमा कमल थापा अहिले छन् । सरोकारवाला परराष्ट्र र स्थानीय मन्त्रालय दुबैको उनी आफैं मन्त्री हुन् । भारतीय दुतावासलगायत कुनैपनि दातृ निकायले आफुखुशी लगानी गर्न नपाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । प्रस्ताव पास नभए दोष उनको हुनेछैन । तर, थापा त्यसो गरिरहेका छैनन् । यसबारेमा उनी प्रतिक्रिया दिनसमेत तयार छैनन् । अवसरपरस्त र ढोंगी प्रवृत्तिको आरोप उनीमाथि उहिल्यैदेखि लाग्ने गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबाहुर चन्दले थापालाई मुसा प्रवृत्तिको व्यक्ति भनि २० बर्ष अघि टिप्पणी गरेको त्यसै होइन रहेछ ।
दुतावासको लगानीले के बिगार्छ ?
नेपाल सरकारले चाहेरपनि भारतमा साइकलसमेत वितरण गर्न सक्दैन । भारत सरकारले दिदैन । कुनैपनि स्वाधीन र स्वाभीमानी देशमा विदेशीले मनलाग्दि सहयोग वितरण गर्न पाउंदैनन् । तर, नेपालमा अचम्मै भएको छ । कतिपयलाई लाग्नसक्छ, सहयोग आयो त के विग्रियो ? दुईचार ठाऊंको विकास भएकै छ । सहयोग नेपालको आवश्यकता र योजनाअनुसार लिइनुपर्छ । नेपाल सरकारले सहयोग लिनसक्छ तर सोको वितरण आफ्नो मातहतमा गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी प्रचलन यही हो । देशको सार्बभौमसत्ता भन्दा ठूलो कसैले दिएको भीख हुन सक्दैन ।
लगानीका नाममा बेरोकटोक दुतावासले देशका कुनाकाप्चामा आफ्नो संजाल फैलाएको छ । दुतावासमा जाने डेलिकेसन टोली र स्थानीय अगुवा भारतीय दुतावासको एजेन्टमा परिणत भइरहेका छन् । उनीहरु आफैंलाई थाहा भइसकेको हुंदैन एजेन्ट भएको तर उनीहरुबाट सूचना लिने काम दुतावासले गरिरहेको हुन्छ । ऐनमौका र चाडपर्वमा दुतावासका तर्फबाट स्तर हेरी उपहार पठाइने गरिन्छ । उपहारको नशा अंगअगंमा परेपछि ऊ भारतको भक्त हुन्छ । अगुवा नै भारतमुखी भइदिएपछि पछुवाहरुको मानसिकता के हुन्छ ? भनिरहनै परेन । भारतले लगानीका नाममा नेपालको सामारिक महत्वका भुभागमाथि अनियन्त्रितरुपमा निगरानी राख्न पाएको छ ।
भोलिका दिनमा गोपनियता भन्ने केही रहनेछैन । भारतले लगानी दलका नेता र स्कुले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको देखिन्छ । नेतालाई विकास दिएर गुलाम बनाउने र जनतामा पकड फैंलाउने उसको रणनीति छ । अर्घाखांचीमा उपप्रधानमन्त्री रायमाझी विकास लिएर शानका साथ पुगे । तर, अन्त्यमा उनले नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरे । त्यहांका विद्यार्थीलाई भारत नभइ देशको विकास सम्भव छैन, भारतले जे भन्छ त्यहीं मान्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइयो । कुनैपनि स्वाभिमानी देशलाई क्रिडास्थल बनाउने यो भन्दा अर्को काइदा के होला ? करोडको मुख हेरेर स्वाभीमानलाई कौडीमा तौलिएको छ । यो दिन ल्याउन जिम्मेवार कमल थापा अहिलेपनि राष्ट्रियताको भाषण गर्न ब्यस्त छन् ।
Foreign Aid India Indian Embassy Nepal kamal Thapa Real Face of Nepal